May 8, 2020 - Alinnpya
ကိုဗစ်ဂျူတီကနေပြန်လာတဲ့ ကိုယ်ဝန်သည်သူနာပြုမလေးကို တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားက အဓမ္မကျင့်
May 8, 2020 AlinnPya Comments Off on ကိုဗစ်ဂျူတီကနေပြန်လာတဲ့ ကိုယ်ဝန်သည်သူနာပြုမလေးကို တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားက အဓမ္မကျင့်
ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတဲ့ သူနာပြုဆရာမလေးတစ်ဦးဟာ ကိုဗစ်ဂျူတီကနေ ပြန်လာစဉ်မှာပဲ တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတစ်ဦးက အတင်းအကြပ် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီးနောက် အဓမ္မကျင့်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ သူနာပြုမှာ အသက်(၄၈)နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ Naples မြို့က ဆေးရုံတစ်ခုကနေ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် တနင်္ဂနွေက တာဝန်ပြီးဆုံးလို့ ဘက်စ်ကားစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်း ညနေပိုင်း (၃)နာရီလောက်မှာ တရားမဝင်လုပ်သားတစ်ဦးရဲ့ အဓမ္မကျင့်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတာပါ။ အမည်မဖော်လိုသူ သူနာပြုဆရာမထံကို La Repubblica သတင်းစာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ သူမက ” […]
ယနေ့မနက်ပိုင်း မြဝတီနယ်စပ် ချစ်ကြည်ရေးတံတား -၂ မှ ၉၉ ဦး ပြန်လည်ဝင်ရောက်
May 8, 2020 AlinnPya Comments Off on ယနေ့မနက်ပိုင်း မြဝတီနယ်စပ် ချစ်ကြည်ရေးတံတား -၂ မှ ၉၉ ဦး ပြန်လည်ဝင်ရောက်
ယနေ့ ၂၀၂ဝခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်နေ့ မနက်(၁၀၃၀)နာရီအချိန်ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတား-၂ မြဝတီ BCFဇုန် အတွင်းသို့ မြန်မာနိုင်ငံသား(၉၉)ဦး စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြရာ မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူများမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီး ကျန်းမာရေးအပါအဝင် လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်၍ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော Facility Quarantine စခန်းများတွင် (၂၁)ရက် နေထိုင်ရန်အတွက် မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် စနစ်တကျ ဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ (စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် အသိပညာပေးနေမှုများအား […]
အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် လူထုကျန်းမာရေးစစ်တမ်း ကောက်မှု လူ ၅ သောင်းခန့်ရှိပြီ
May 8, 2020 AlinnPya Comments Off on အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် လူထုကျန်းမာရေးစစ်တမ်း ကောက်မှု လူ ၅ သောင်းခန့်ရှိပြီ
အင်းစိန်မြို့နယ်မှာ ရောဂါပိုးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊ တောင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အရှေ့ကြို့ကုန်းရပ်ကွက်နဲ့ အနောက်ကြို့ကုန်းရပ်ကွက်တွေကို တိုင်းအစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီ အဓိက ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ အင်းစိန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းအောင်က ပြောပါတယ်။ အခုလို ကိုဗစ် ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ လူထု ကျန်းမာရေး စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအစီအစဉ်ဟာ အင်းစိန်မြို့နယ်မှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ သက်ဆိုက်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်တာလို့ အင်းစိန်မြို့နယ် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ကိုစည်သူဇော်က ပြောပါတယ်။ #DVB #ကျန်းမာရေးစစ်တမ်း #၅သောင်း #အင်းစိန် […]
Mask တပ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ ကျောင်းသားငယ်နှစ်ဦး လဲကျသေဆုံး
May 8, 2020 AlinnPya Comments Off on Mask တပ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ ကျောင်းသားငယ်နှစ်ဦး လဲကျသေဆုံး
မျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်ကာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့် ကျောင်းသားငယ်နှစ်ဦး လဲကျသေဆုံး ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေရင်း လဲကျသေဆုံးခဲ့တဲ့ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားငယ် နှစ်ဦးဟာHenan Province ပြည်နယ်နဲ့Hunan ပြည်နယ်က ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပ် ကာလ သုံးလတာ ပြည်နယ်တွေပိတ် အလုပ်တွေရပ်ဆိုင်း ကောျင်းပိတ် လော့ ဒါင်းလုပ်ခဲ့ပြီး မေလမှာ ကျောင်းတွေပြန်တက်ဘို့ ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေက အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယာ။ ကျောင်းသားတွေကို မျက်နှာဖုံးတွေ […]
ဆိုင်ထဲဝင်ပီးပိုက်ဆံခိုးတာမိလို့ ပွဲတွေကြမ်းတာ အမြဲခိုးနေကြသူခိုးတဲ့ မှတ်ထားကြပေါ့(ရုပ်သံ)
May 8, 2020 AlinnPya Comments Off on ဆိုင်ထဲဝင်ပီးပိုက်ဆံခိုးတာမိလို့ ပွဲတွေကြမ်းတာ အမြဲခိုးနေကြသူခိုးတဲ့ မှတ်ထားကြပေါ့(ရုပ်သံ)
ဒီသူခိုးကိုတော့ Ti Ti Thandar အကောင့်ကနေ လိုက်လွှင့်ပီး ဖမ်းတာဖြစ်ပါတယ် ဆိုင်ထဲဝင်ပီးပိုက်ဆံခိုးတာမိလို့ ပွဲတွေကြမ်းတာ အမြဲခိုးနေကြသူခိုးတဲ့ မှတ်ထားကြပေါ့ ခုတော့မကွေး အမှတ်၂စခန်းရောက်သွားပြီ သနားတဲ့သူတွေလိုက်သွားလို့ရပြီ မူရင်းအကောင့်မှာ တင်ထားတာကတော့ အမှတ် ၂ ရဲစခန်း.သို့ ရောက်နေပီ အလွတ်မပေးဘူး ဘယ်လောက်ကုန်ကုန် အမှုဖွင့်ပီ လက်ထိပ်ခတ်ပီ. တမြို့လုူံးပတ်ခိုးနေတဲ့ သူခိုးမ. ထွက်ပြေးလို့ နပန်းလုံးလိုက်ရတာ နှလုံးရောဂါတောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိဘူး ငါ့စောင့်နေတာ ကြာပီ ကဲ အားလုံးလဲ ဂရုစိုက်ကြပေါ့။ […]
May 8, 2020 AlinnPya Comments Off on ခုထိဘာသာရေးအစွန်းရောက်လျှက်ရှိသော ဒေးဗစ်လားရုပ်သံ
ခုလို ကျမ်းမာရေး ပြန်ကောင်းလာချိန်မှာ ဘုရားကိုလည်းချီးမွမ်းပါ။ ကုသပေးတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ကူညီပေးတဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အစိုးရ၊ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အလှုရှင်တွေ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း တခွန်းလေးတော့‌ မပြောသင့်ဘူးလား…..? အခြားခရစ်ယန် ဘာသာတွေကိုတောင် အားနာလှပါပြီ။ ကိုယ့်မှာအမှားရှိခဲ့ရင် ဝန်ခံရဲတဲ့စိတ် ရှိသင့်ပါတယ်။ထိထိရောက်ရောက် အရေးမယူသေးရင် ဘာသာရေး မှိုင်းတိုက်မှုတွေ ကြီးပွားလာမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ကိုယ့်မှာအမှားရှိခဲ့ရင် ဝန်ခံရဲတဲ့စိတ် ရှိသင့်ပါတယ်။ အစိုးရကလဲ ခုထိဒီဒေးဗစ်နွားကို ထိရောက်တဲ့ တရားစွဲဆိုမှုတွေ မလုပ်သေးဖူး။ […]